दुबईमा अलपत्र परेका ३० नेपालीको गुहार : सरकार हामीलाई चाँडो उद्दार गर्नुहोस् ! » Khulla Sanchar
दुबईमा अलपत्र परेका ३० नेपालीको गुहार : सरकार हामीलाई चाँडो उद्दार गर्नुहोस् !
काठमाडौं : दुबईमा सेक्युरिटी गार्डका रुपमा लगिएका ३० जना नेपाली दयनीय स्थितिमा बाँच्न बाध्य बनेका छन् । ११ महिनाअघि दुबई पुगेका उनीहरुले शुरुवातदेखि सम्झौता गरे अनुसारको तलब नपाएको र पछिल्लो ४ महिनादेखि तलबनै नपाएको बताएका छन् ।
नेपालबाट पठाइनअघि २६ दिन १२ घण्टाको दरले काम गरे १७८१ दिराम र ३० दिन काम गरेमा २०८१ दिराम दिने सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौता अनुसार को रकम नदिई कहिले २००–३०० कहिले ९००–१२०० मात्र दिएको पीडित मिङमा तामाङ वताउँछन् ।